Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo 'Umfana Osemuva Komnyango' Izindawo Ze-trailer Zokuthumba Ekugxileni Okuthusayo
Umfana Emva Komnyango ibuyisa lowo mlilo wasendle wokwesaba owawungama-80s. Labo asebekhule ngokwanele ukuthi bangakhumbula, ukunyamalala kuka-Adam Walsh nabaphenyi bathola ikhanda lomfana omncane ompofu emgodini wamanzi, bazokhumbula ukuthi bonke abazali babebheke kakhulu izingane zabo. Umama, uqobo wayehlanya ngokuthi ngimshiye angaboni, ngisho nomzuzwana lapho siya emnyangweni noma ezitolo zokudla. Ama-80s ayegcwele uvalo lwabazali ngenxa yokwesaba ukuthumba. Le filimu ibuyisa kakhulu leyo mizwa, futhi idlula leyo nhlobo yokwesaba. Isithombe esenziwe kahle kakhulu ngabaqondisi beThe Djinn, uDavid Charbonier noJustin Powell.
Amazwibela we Umfana Emva Komnyango kuhamba kanjena:
In Umfana Emva Komnyango, ubusuku obungethusayo obungacabangi bulindele uBobby (Lonnie Chavis) oneminyaka eyishumi nambili kanye nomngani wakhe omkhulu, uKevin (Ezra Dewey), lapho bethunjwa besendleleni ebuyela ekhaya bebuya esikoleni. Ukwazi ukubalekela imingcele yakhe, uBobby uzulazula emahholo amnyama, ethandazela ukuba khona kwakhe kunganakwa njengoba evikela ozomthumba njalo. Okubi kakhulu ukufika komunye umuntu angamazi, okuhlelwa kwakhe okuyimfihlakalo nomthumbi kungasho ukubhujiswa okuthile ngoKevin. Njengoba engenazo izindlela zokucela usizo namamayela ezwe elimnyama kuzo zonke izinhlangothi, uBobby uqala umsebenzi wokutakula, ezimisele ukuthi yena noKevin baphume baphile… noma bafe bezama.
Umfana Emva Komnyango ihlukumezeka ngendlela yayo yokuthumba. Imithetho yokuphepha nokungabulali izingane ayikho etafuleni. Ayidlali ngemithetho futhi ngokwenza lokho ikhuphula ukwethuka kuye ku-11.
Umfana Emva Komnyango ifika kuphela eShudder eqala ngoJulayi 29.
Ukuzivumelanisa ne-Eli Roth's Borderlands kubukeka ngale kokumnandi futhi kusongwe ngokusemthethweni. Funda kabanzi lapha.
ukuthumbaUmfana Emva Komnyango